Formwork fekitori, vatengesi - China formwork vagadziri
Chigadzirwa Nhanganyaya Luowen 120 Simbi Furemu Formwork Sisitimu inonyanya kugadzirwa nesimbi furemu, plywood pani, scaffold bracket, coupler, muripo waler, tambo tsvimbo, kusimudza hookformwork, simbi kiramba uye yekudhonza-kusundira prop, nezvimwe. 1. Simbi furemu formwork ndeye 18mm ukobvu plywood yakafukidzwa nesimbi isina mhango. 2. Iyo furemu yakasimbiswa zvakanyanya, uye iyo fomu yemadziro inogona kutakura yekumanikidza kumanikidza 60KN / m2 nepo iyo formwork yekoramu inogona kutakura 80 KN / m2. 3. Segadziriro yakasarudzika, inochinjika kuti iungane, woo ...
Rondedzero 1. Kurema: Inenge 15KG / Square Meter 2. Chinyorwa: PP + magirazi tambo + Nilon 3. Kuumbwa: Mapaneru, mubate 4. Resued: kanopfuura ka100 kashanu 5.Eco-inoshamwaridzika: Hongu 6. Thermal deformation tembiricha: Pamusoro pe150. degree Celsius 7. Unganai nekukatanura: Nyore uye nekukurumidza 8.Certification: CNAS Bvunzo 2.Column Saizi: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm Panel kukwirira: 750mm 3.Material uye Maumbirwo 1.Material: PP + girazi tambo + Nilon 2. Maumbirwo: mapaneru, makona, mubato uye zvishongedzo 4.Feature 1.Long lifespan & ...
Details: 1. Kurema: About 15KG / Square Meter 2. Chinyorwa: PP + girazi tambo, uye Nilon inobata 3. Kuumbwa: Mapaneru, makona, mubato uye zvishongedzo 5. Resued: kanopfuura zana nguva 6. Thermal deformation tembiricha: Pamusoro pe150 degree Celsius 7. Unganai nekukatanura: Nyore uye nekukurumidza 8.Certification: CNAS Bvunzo Column Saizi: Kubva 200 * 200mm kusvika 600 * 600mm, hukuru hwakawanda senge pazasi chati: Zvinyorwa uye Maumbirwo 1.Material: PP + girazi tambo 2.Structure: mapaneru , makona, mubato uye zvishongedzo Feature 1.Long ...
Matanda Beam Formwork Flat formwork inoumbwa neplywood, matanda danda uye simbi walingng. Gadzirisa plywood nematanda matanda nekukanda screws kubatanidza matanda danda nesimbi waling ne flange kiramba zviri nyore kuunganidza, kukatanura uye kugadzirisa mune saiti. Icho chakareruka muhuremu uye chiri nyore pakuvaka uye kutakura. Iyo yekuvaka zvakare ine hushamwari kune nharaunda. Iyo plywood ine kuita kwakakwana. Iyo plywood ine yakanaka mweya kukwana uye kugona kwemvura, iyo yakapera ...
Plastiki mativi ekoramu formwork
Kambani Yedu yakagadzira chigadzirwa chitsva, mapeji akareba girazi fiber inoumba fomu formwork, ichishandisa polypropylene sechinhu chepasi, girazi faibha rakasimbisa rakasanganiswa zvinhu, uye chakuvhuvhu ichimanikidza kuita zvimiro. Iyo fomati system ine 65 ukobvu hwakajairwa mafomu uye makumi matanhatu neshanu akaumbwa formwork. Inogona kushandiswa mumhando dzakasiyana dzekubatanidza kumira dzakasiyana siyana dzekuvaka. Yakachipa mutengo uye yakapusa mashandiro ndiwo makuru mabhenefiti epe refu girazi fiber ...
Wall & rakanyorwa Plastic formwork
ABS PLASTIC FORMWORK ZVAKANAKIRA: 1.LIGHT Mwenje mapaneru akachengeteka, ari nyore kushandisa uye anobudirira. Ichokwadi kuti kudzokorora kusimudza midziyo inorema kunokonzera kuneta nekukuvara. Zhongming plastiki formwork inorema paavhareji 17 kg / m2 isina chinhu chimwe chinorema kupfuura 13 kg: izvi zvinoreva kuti iyo system yese inogona kugara ichishandiswa neruoko, mune chero mamiriro. Kushanda kwecrane hakufanirwe kuita zvekare, kuchipa nzvimbo dzekuvaka dzakachinjika zvakanyanya pasina kukanganisa pane hutano nekuchengeteka 2.F ...
1.Product Nhanganyaya Izita rakazara re63 Simbi Furemu Fomu Sisitimu ndeye 63 Simbi Furemu Plywood Yakavaka-kumusoro Fomati Sisitimu, kuomarara kwayo kwakakwirira uye iyo yakanyorova, inogona kusimbiswa uye kubvisa zvachose kana zvakasiyana 2.Product Dhata 63mm Plywood pani: 12mm 2.weight: 30kg / m2. 3.Surface kurapwa: kupenda kupenda 6.Model Nhamba: LWSF1063 7.Material: Simbi Q235 3.Product Zvimiro 1.Cost kuchengetedza 1) yakapusa kuungana, kumisa uye r ...
1.Product Nhanganyaya: Luowen nyowani 63.5 Simbi Furemu Fomu Sisitimu inowanzo kuve yakaumbwa nesimbi furemu, plywood pani, scaffold bracket, coupler, muripo waler, tambo tsvimbo, kusimudza chirauro, simbi simbi uye dhonza-kusundira prop, nezvimwe. inogona kuunganidzwa pamberi pevhu kana kudzivirira nzvimbo dzakaomarara dzekuvaka. Shandisa michina kuiisa panzvimbo yekuvaka uye udururire kongiri yekoramu. Kana iyo formwork yabviswa mushure mekuchengetedza, hazvidi kuti ubvise zvachose ...
Nhanganyaya: Aluminium formwork iri kuwedzera kufarirwa nekuda kwehuremu hwayo uye simba rakanaka. Zvinoda zvishoma zvitsigiso uye zvisungo. Aluminium formwork system zvikamu zvinosanganisira madziro, makoramu, matanda, mahwendefa, matemplate uye mapuranga emadziro. Pini yakazvitsaurira mabheji anoshandiswa kubatanidza matemplate. Iyo template system inogona kubviswa pane yekutanga danho. Saizi yakatarwa saizi yeiyo rusvingo template ndeye 100mm-450mm X 1800mm-2400mm. Saizi yakatarwa saizi yedenga template ndeye 600 ...
Zita: Firimu Yakatarisana Plywood Saizi: 1220x2440mm, 1250x2500mm nezvimwewo Ukobvu: 12/15 / 18mm nezvimwewo Core: Poplar, Eucalyptus, hardwood, combi Glue: MR, MELAMINE, WBP Usage: Kuvaka, package Yekunze kurongedza: mapallet kana katoni Formwork / shuttering iri rudzi rwekushandisa kweplywood. Formwork plywood inogona zvakare kunzi Shuttering Plywood. Firimu yakatarisana plywood / MDO yakatarisana plywood / Wood ukanyatsotarisana yakatarisana plywood inogona kushandiswa seFomu Basa. Iyo glue yeFormwork plywood ndeyeWBP glue. Asi kana iwe uchida hupfumi ...
Scaffolding Chinogadziriswa Screw Jack, Metal Cuplock Scaffolding, Kwikstage Scaffolding Chishongedzo, Ringlock Scaffolding Zvikamu, Ringlock Scaffolding chikomboredzo, Heavy Duty Ringlock Scaffolding,